मेहनत गर्नु पर्यो सवै काममा सफल भईन्छ -अमृत गुरुङ « Phidim Today
Published on: 18 January, 2019 2:10 am
टुडे संवाददाता/ पाँचथर, ०४ माघ
लोक रक शैलीका गीतका कारण नेपथ्य नेपाली संगीत जगतमा चर्चित छ । नेपथ्यको लाईभ कन्सर्ट लोकप्रिय मानिन्छ । नेपथ्यका मुख्य व्याक्तिको रुपमा अमृत गुरुङ चिनिन्छन् । नेपाली सांगीतिक जगतका सेलिब्रेटि अमृतसँग फिदिम टुडेका लागि सरला रेग्मीले गरेको कुराकानी ः
तपाइलाई प्रत्यक्ष भेट्दा त्यति बोल्नु हुन्न तर प्रस्तुती दिदा कसरी माहोल तताउनु हन्छ ?
मलाई दर्शक तथा स्रोताहरुले दिनुभएको माया, साथ तथा स्टेजमा जाँदा आफुले गर्ने काम सहजताको साथ गर्न सकियो भने । हामी संगितकर्मीहरु मञ्चमा रमाउन सकियो भने दर्शकहरु उत्साहित हुनुहुन्छ र महोल तातिन्छ ।
तपाई फिदिम पहिलो पल्ट आउनु भएको हो ?
धेरै पहिले फिदिम आएको थिएँ । म दुई तिन पल्ट फिदिम आएको छु । यहाँ बास पनि बसेको थिएँ । करिब २१ बर्ष अगाडी तमोरमा म ¥याफ्टिङ गर्न आएको थिएँ । त्यस बेलामा माथी फिदिम पर्छ भन्ने थहा भयो र आउने मौका पाएँ ।
कस्तो लाग्यो फिदिममा तपाईको फ्यानहरु देख्दा ?
म पहिला फिदिम आउँदा लडाई भईरहेको थियो । त्यस समयामा रातको ६ बजे पस्चात सुनसान हुन्थ्यो, मान्छे मान्छेसंग बोल्न डराउने गर्थे । आर्काे पल्ट आउँदा गणतन्त्र आएको थियो । यो पल्ट कार्यक्रम लिएर आउँदा झनै रमाइलो लागेको छ । मलाई यस्तो लाग्छ एउटा कलाकारलाई यो किसिमको माहोल दिनु, सम्मान दिनु, माया दिनु भएकोमा एकदमै रमाईलो लागेको छ ।
सन १९९० मा नेपथ्य ब्याण्डको स्थापना गर्दा कसरी सोच्नु भयो ?
त्यस समयमा हाम्रो साथीहरु थिए । हाम्रो एकजना साथी दिपक भन्ने साथीले उहाँ नेपाली साहित्यमा पनि गजल तथा कविता मन पराउने गर्नुहुन्थो । उहाँले नेपथ्य भनेर हाम्रो ब्याण्डको नाम राखौ भनेर भन्नु भयो । उहाँले जुराएको नाम बाट हामीले काम थाल्यौँ । गित रेकटीङ पनि गरेका छांै ।
सवै गितहरु के भएर हिट भएको जस्तो लाग्छ ?
मलाई के लाग्छ भने नेपथ्यले गरेका नेपाली गित संगितहरु लोक गित जस्तै आधुनिकिकरण भएको बाध्य यन्त्रहरुमा बसेर हामीसंग भएका गाउँघरमा चलेका लोक भाकाको शव्दहरु सवै क्षेत्रका हिमाल, पहाड, तराई लागययतका शब्दहरु समेटिएर रचना गरिएको हुनाले साथै हाम्रो गितमा नेपालि पन भएको कारणले गर्दा हिट भएको जस्तो लाग्छ । कुनै कुनै गित सोचे भन्दा पनि धेरै हिट हुन्छ । जब एउटा कलकारले गित गाउदा खेरी पहिले आफुलाई छुनु पर्याे गितमा एउटा मर्म हुन्छ, बिम्व हुन्छ र बजारले के मागेको छ तथा समाजले के कस्तो परिवेस सुहाउदो गित गाउदा ठिक हुन्छ । हामी कुन परिवेसमा रहेका छांै भन्ने कुरालाई समातेर गित बनाउने हो । जस्तो कविले के भन्छ तर सवैले बुझदैन तर कलाकारले जुन गित गाउछ त्यो गित जसम ागाँउको दुःख, पिडा, खुसी समेटिएको हुन्छ त्यो गित सवैले बुझन सहज हुने गरको छ । सबैले मन पराए पछि त्यो गित हिट हुने भयो ।
तपाइको लुवाइखुवाइ एकै खाल्को देखिन्छ सदाबहार राज केहो ?
मेरो कपाल पहिले कालो नै थियो । अहिलेको उमेरको परिवर्तन संगै कपाल पनि सेतो भएको हो । मलाई धेरै जनाले सल्ला पनि दिनु भयो तपाईले कपालमा कालो रंग गर्नुहोस भनेर तर मलाई कलर गर्न मन नलागेको कारणले गर्दा मेरो कपाल सेतो भएको हो ।
तपाईले अहिले सम्म कुनै पनि अवाडमा देखिनु भएको छैन किन ?
हामी पहिले पनि हिट नै रहेका थियौ । तर हामी अवाडको पछि लागेनौ । अवार्ड पाउनु भनेको एउटा प्रोत्साहन हो । अवाड पायो भनेर दंग हुनु भन्दा अवाड पाउनु पर्छ भनेर मेहनत गर्नु राम्रो कुरा हो । समुद्रमा एक बाल्टी पानि निकाल्दा पनि सकिने होईन र एक बाल्टी पानि थप्दा समुद्र भरिने होइन । त्यसैले अवार्ड भए पनि ठिकै र नभएपनि ठिकै हो ।
तपाईमा सकरात्मक उर्जा कसरी आउँछ ?
जीवनको भोगाइले जिन्दगी एकदम छोटो छ जस्तो लाग्छ । जतिन्जेल बाँचिन्छ जिवन रामाईको साथ राम्रो तरिकाले विताउ जस्तो लाग्छ । मलाई मिल्ने चिज मिलाउ जस्तो लाग्छ र नमिल्ने जिच जस्तो हातको पाँच औल बरावर छैनन् भने नहुने तथा नपाइने चिज किन प्रयोग गर्ने जस्तो लाग्छ ।
तपाई मिडियामा कम आउनु हुन्छ किन ?
मिडियामा आएर पनि के गर्नु र ? त्यसैले नचाहेको हो ।
नेपथ्यले २०१३ एरिनामा प्रस्तुती राख्यो कस्तो अनुभव भयो ?
नेपालमा धेरै व्याक्तिहरु कलकार रहेका छन । धेरै मेहनत पनि गरका हुन्छन, हामी भन्दा धेरै राम्रो गाउने मान्छेहरु पनि छन । तर कति चिजहरु के हुन्छन भने भाग्यको कुरा पनि हुदो रहेछ । मेरो विचारमा नेपथ्य एउटा भाग्यमानी ठान्छु किनभने एरिनामा प्रस्तुती दिन पाइयो जुन हाम्रो अहोभाग्य हो । त्यो मन्चमा हामीलाई दर्शकहरुले जुन किसिमको माया र हौसला दिनु भयो । अनि मलाई लाग्यो कि नेपालको संगितलाई माया गर्ने मानिसहरु अझै छन । देशमा मात्र होईन विदेशमा पनि जहाँ नेपालीहरु छन त्यहाँ नेपाली संगित पनि पुगेको छ भन्ने लाग्यो ।
तपाईको बाल्यकाल कसरी वित्यो ?
म गाउँमा जन्मिएको हो र मेरो बाल्य अवस्था सामान्य अवस्थामा नै वित्यो । गोठालो जाने, घास दाउदा काट्ने जस्ता घरायसी काममा नै बाल्यकाल वित्यो । जब मेरो बुबाले मलाई पोखरा पढाउन ल्याउनु भयो र पोखरामा पढने मौका पाए । म बच्चामा चित्रकारीता गर्ने गर्थे । गित भनेको पछि साथिहरु संग लागेपछि मात्र गरको हो ।
आफु पनि गितगाउन सक्छु भनेर कहिले थहाँपाउनु भयो ?
मैले अहिले सम्म थाह पाएको छैन । म पनि राम्रो गित गाउँछु भनर । गित गाएको छु तर मलाई आफ्नो गित मन पर्दैन म अर्काले गाएको भने मन पर्छ ।
पाँचथरको के मन पर्याे तपाईलाई ?
म फिदिम बजारमा घुमे बरिपरी पहाड, रमाईलो बातावरण रहेको पाएँ । मलाई सबैभन्दा मन परेको चिज भनेको सबै मान्छेको अनुहारमा हासो रहेको छ । नेपालीमा हुने हाँसो फिदिममा रहेको पाए ।
अब आउदै गरका नयाँ कलाकार हरुलाई के भन्न चहानुहुन्छ ?
आउनुहोस सबैको भविष्य उज्यालो रहेको छ । सवै काम नराम्रो छ्रैन । सबै काम गर्न संभव छ । मेहनत गर्नु पर्याे सवै काममा सफल हुन सकिन्छ ।
दर्शक स्रोताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
तपाई जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ खुसी रहने प्रयास गर्नुहोस । जिन्दगीमा बाँचिन्जेल गर्ने कामहरु गर्नुहोस । जीवनलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै आफ्नो जीवन चलाउनु होस भन्न चहान्छु ।